Portal an'ny tompona: Omeo fotoana fidirana amin'ny tompony mangarahara tanteraka
Betsaka ny orinasam-pitantanana momba ny hofan-trano fialan-tsasatra, ny taratasim-bola fohy na trano misy serivisy izay manolotra serivisy ho an'ny tompona trano na mpampiasa vola manofa trano ho any ambany (fantatra amin'ny hoe arbitrage fanofana any Etazonia na Rent to Rent / R2R any UK).
Ny ahiahy iraisan'ny mpanjifany rehetra dia ny mangarahara avy amin'ny ampahan'ny mpampiantrano. Midika izany matetika ny fananana fidirana amin'ny ora tena izy amin'ny famandrihana, mba hahafantaran'izy ireo ny haavon'ny olona sy rehefa tonga sy miala ny vahiny. Ny haavon'ny fibodoana dia natao hanondroana ny fahombiazan'ny asa, ary ny ora hahatongavana sy ny fiainganana dia takiana amin'ny tranga rehefa misy tompony te hiditra amin'ny fananany eo anelanelan'ny famandrihana.
Na izany aza, ny tompona trano fanofana fialan-tsasatra rehetra dia hahafantatra fa ny haavon'ny trano fonenana dia tsy haavon'ny fampisehoana ampy, satria ny toerana iray dia azo zahana tanteraka amin'ny taha ambany. Matetika izy ireo dia tsy maintsy miandry hatramin'ny faran'ny volana (ary angamba andro fanampiny mihoatra izany) mba hahitana hoe nanao ahoana ny fananan'izy ireo tamin'ny volana lasa, izay mety niova be ny toe-tsain'ny tsena (ary avy eo ny zava-bitan'ny fananany).
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou tompona vavahady manampy?
Ny Zeevou's Owner Portal dia manome fidirana amin'ny fotoana tena izy ho an'ny tompona, tompon-trano ary mpampiasa vola. Ny mpampiantrano dia afaka mamaritra raha ny tompon-trano ihany no tokony hahita afa-tsy ara-bola, na ara-bola ary ny antsipirian'ny vahiny.
Ny zavatra hitan'ny tompony rehefa miditra dia miankina amin'ny haavon'ny fidirana omen'ny mpampiantrano azy rehefa mamorona ny mombamomba azy ireo.
Raha misy mpampiantrano voamarina hahita antsipirihany ara-bola, dia tsy hahita afa-tsy ny vola mifandraika amin'ny famandrihana, sy ny fanampiana ampiana izay nanendrena azy ireo ho ampahany amin'ny tombom-barotra. Hahafahan'izy ireo miditra amin'ny Tatitra Momba ny Volana isam-bolana koa izy ireo hahafahan'izy ireo mahita ny antsipirian'ny vola miditra sy ny fandaniana mifandraika amin'ny fananany. Io dia ahafahan'ny tompona manana fahatakarana mazava momba ny zava-bitan'ny fananany, ary koa ny kaomisiona notanan'ireo mpandraharaha mpamandrika sy saram-pitantanana notenenin'ny tompon-trano.
Raha nomena fidirana hijerena angona ho an'ny vahiny ny mpampiasa vola, ankoatr'izay voalaza etsy ambony, dia ho hitan'izy ireo ihany koa ny anarana sy ny antsipirian'ny fifandraisan'ireo vahiny mipetraka.
Amin'ny lafiny roa, ny mpampiasa vola dia afaka mahita ny ora hahatongavany sy ny fiaingany koa sy ny isan'ny vahiny mipetraka. Ireo dia azo jerena ao amin'ny famandrihana mihitsy, na amin'ny kalandrie maha-olona. Ny tompona dia tsy mahazo miditra amin'ny famandrihana vahiny izay nijanona tao amin'ny tarika misy azy ireo ary tsy afaka mahita ny antsipirian'ny fananana izay tsy azy ireo.